Dts sy Nestle mitazona fifandraisana tsara amin'ny fiaraha-miasa mandritra ny taona maro. | Shandong Dingtaisheng Machinary Technology Co., Ltd.
Dts sy Nestle mitazona fifandraisana tsara amin'ny fiaraha-miasa mandritra ny taona maro.
Tamin'ny taona 2008, ny dts dia nanome ny sterilizer rotary rano feno voalohany hametrahana orinasa qingdao any Sina ho an'ny famokarana ronono misy etona vita am-bifotsy. Nosoloiny soa aman-tsara io karazana fitaovana namboarina tany Alemana io. Tamin'ny taona 2011, dts dia nanome setratra 12 sterilizers rotary dts-18-6 ho an'ny jinan yinlu (ny fahafahan'ny 600cpm) amin'ny famokarana congee mifangaro.
Tamin'ny 2012, ny dts dia namatsy sterilizer fanodinana rano 10ts dts-16-6 ho an'ny hubei yinlu (ny fahafaha-1000cpm) ho an'ny famokarana lehibe ny kafe am-bifotsy (nescafe) ao amin'ny yinlu iaraha-miasa.
Tamin'ny faran'ny taona 2012, ny dts dia nanome setratra 6 sterilizers etona karazana dts-13-4 ho an'ny xiamen yinlu (ny fahafahan'ny 600cpm) ho an'ny famokarana lehibe ny nescafe am-bifotsy sy ny voanjo.
Tamin'ny 2013, dia nanao sonia ny fifanarahana fikarohana miaraka amin'ny Nestle beijing r & d ny dts mba hamoronana vokatra am-bifotsy vaovao (congee instant in ipu) mandritra ny herintaona.
Tamin'ny 2014, ny dts dia nametraka andiana sterilizer batch mandeha ho azy ho an'ny xiamen yinlu (fahafahan'ny 1200cpm) ho an'ny famokarana lehibe ny nescafe am-bifotsy sy ny voanjo. Ny rafitra dia nahitana famonoana rano 4 dts-18-6, milina harona mandeha sy mamoaka harona ary mpanera.
Tamin'ny 2015, ny dts dia nanolotra sterilizer spray 10 rano dts-14-4 ho an'ny xiamen yinlu (fahafaha-manana 1000cpm) amin'ny famokarana dite raokandro.
Tamin'ny taona 2016, dts dia nanome 6 set dter-18-6 sterilizers rotary etona ho an'i jinan yinlu (ny fahafaha-600cpm) hamokarana congee mifangaro.
Amin'ny taona 2019 dia mety hiara-hiasa amin'ny orinasa turkey gonenli Nestle oem ny orinasa tsara, ary efa vita amin'ny famokarana.
Tamin'ny 2019 septambra dts dia niara-niasa tamin'ny orinasa sri lanka ceylon zava-pisotro Nestle oem orinasa nahomby.
Tamin'ny 2019 desambra dts dia niara-niasa tamin'ny orinasa malaysia Nestle nihong nahomby.